Ny Pixel 3 XL sy ny fiorenany miafina | Androidsis
Ny Pixel 3 XL sy ny fihenany azo afenina
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Finday
Ora vitsy lasa izay dia afaka nahafantatra tamin'ny fomba ofisialy ireo maodely vaovaon'ireo finday Google malaza izahay. Ny Google Pixel 3 sy Pixel 3 XL efa zava-misy izy ireo. Ary tsy ho ela dia afaka mividy azy ireo isika, amin'ity indray mitoraka ity eny, avy any Eropa. Toy ny teo alohany, ny Pixel vaovao dia miavaka amin'ny fanolorana hery sy kalitao amin'ny lafiny efatra.
Iray amin'ireo tsy fantatra voalohany izay noheverina fa nisy ny fivoahan'ny voalohany an'ity smartphone vaovao ity raha toa ka entin'ny lamaody mampiady hevitra an'ny "notch" i Google. Ary farany, ary saika ny faminaniana rehetra dia tanteraka, ny lehibe indrindra amin'ny Pixel 3, ny XL, dia manana ny lohany lehibe eo an-tampony.
1 Raha manafina ilay izy isika dia mahafoy ny ampahan'ny efijery misy azy
2 Ny dikan'ilay "notch" dia ny fanararaotana bebe kokoa ny tontonana eo aloha
Raha manafina ilay izy isika dia mahafoy ny ampahan'ny efijery misy azy
Efa nitranga izany rehefa nidona tamin'ny tsena ilay maodely iPhone X teo aloha. Ilay fanamarihana dia nanana smpanaraka sy mpanaratsy, toy ny zava-baovao rehetra miseho. Tamin'ny voalohany dia hafahafa izany, ary tsy mahazo aina mihitsy ho an'ireo mpampiasa. Ohatra, ao amin'ny lavaka misy ilay kisary hifehezana ny haavon'ny bateria dia tsy nifanaraka ny isa isan-jato. Tsy misy isalasalana fa hadalana.
fa efa nahazatra antsika hihaona amin'ny laharam-pahamehana, miaraka amin'ireo fantina tsy fantatra, amin'ny ankamaroan'ny maodely vaovao an'ny orinasa tsirairay. Tsy hiditra amin'ny adihevitra izahay hoe tsara kokoa sa ratsy ny manana na tsia. Fa zava-misy izany miaraka amin'ny fisiany ny isan-jaton'ny fampiasana ny tontonana smartphone dia avo kokoa noho ny tsy misy azy.
Afaka nahafantatra tamin'ny alàlan'ny «vaovao» izahay fa ny fiorenan'ny Google Pixel 3 XL dia azo afenina amin'ny rindrambaiko. Tsy misy zava-baovao satria misy fampiharana afaka manao azy amin'ny fitaovana rehetra manana ny "volomaso". Fa manontany tena izahay Inona no ilaina amin'ny fividianana finday avo lenta miaraka amin'ny notch hanafina azy? Raha heverina izany fahaverezan'ny santimetatra mahasoa izany amin'ny efijery.
Ny dikan'ilay "notch" dia ny fanararaotana bebe kokoa ny tontonana eo aloha
Misaotra ilay "notch" malaza afaka mivoaka bebe kokoa eo alohan'ny findaintsika isika. Ary miaraka aminy maniry mafy manana efijery lehibe kokoa amin'ny terminal izay tsy mitombo habe. Izay no antony toa somary adala ny mividy finday avo lenta miaraka amin'ny efijery tsara ary "manafoana" ny ampahany aminy.
Araka ny lazaintsika hatrany, banga ny bokin'ny tsiro. Fa raha ianao dia iray amin'ireo izay tsy tia ny laza malaza, ny anao dia mividy finday avo lenta tsy manana an'io. Betsaka ny tena tsara eny an-tsena, sa tsy izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Pixel 3 XL sy ny fihenany azo afenina
Raha nanao an'izany ny google, dia izany no antony hanaiky fa mankahala ny zavatra nataony tamin'ny notch ny ankamaroan'ny mpampiasa
misy sisin'ny goavambe eo an-tampony, maharikoriko
Miroboka ao amin'ny Adventure Zombie Rollerz Pinball RPG
[APK] Ahoana ny fomba hananana Xiaomi Animoji amin'ny telefaona Android